Nzira yekuwana sei PR9 inotevera backlinks munguva pfupi?
Kuita kuti bhizinesi rako rionekwe paGoogle, unofanirwa kutarisa pa 1 rokutanga kana zvishoma pane peji yechipiri chekutsvaga. Zvakaoma kusundira nzvimbo yako kusvika kuGoogle yeGoogle SERP sezvo makwikwi emisika yose yakakosha yakakwirira. Zvinhu zviviri zvinokosha zvinogona kuita kuti bhizinesi rako rekutsvaga rive rakabudirira inotsvakurudza injini nekushambadzira. Paunenge uchibhadhara pazvikwereti zvinodarika zvinogona kuonekwa zvakadhura kune mamwe mabhizinesi, kutsvaga injini yekugadzirisa kunogona kuitwa nemari shoma shoma - spirales coils for vapes. Zvisinei, zvakakosha kutaurwa kuti iwe unoda kuziva zvose kugadzirisa zvinhu uye pfungwa uye zvipfeko uye matanho ekugadzira kukunda kushanda kwekugadzirisa. Nenzira yakanaka, pane dzakawanda dze SEO blogs seyiyi, yakagadzirirwa kugadzirisa hukama hwako hwemagariro.
Nyaya ino yakagadzirirwa musoro wekuvaka PR9 dofollow backlinks. Iwe uchadzidza kuti zvakakosha sei backlinks kune bhizinesi rako uye chii chinonyanya kuwanikwa webhu uye nzvimbo dzekugarisana nadzo dzingashandisa kuumba zvakakosha zvakanyanya uye yehutano hunoona hunoenda kune yako nzvimbo.
Nei uchida kuvaka dofollow backlinks pane PR9 web sources?
Maitiro evanhu vakawanda akadai se Facebook, Twitter, uye LinkedIn vane peji yePRR yakakosha pane SEO chekuongorora. Iyi mahwendefa ndiyo nzvimbo dzakanakisisa iyo nzvimbo yako inofanira kutaurwa. Kuumba backlinks ku blog yako kubva pa PR9 web sources zvingangoita kuti zvive zvakanaka kuchinja nzvimbo yako yekutarisa nzvimbo paGoogle. Ndicho chikonzero icho chirevo chakanaka kushandisa masimba avo akakwirira nekuda kwekubatsirwa kwako nekudzorera kumashure bhabheri rako kubva kwavari. Kana zvose zvikaitwa zvakanaka, uchawana humwe simba kubva kune injini uye nzvimbo yakakwirira.
Pane maviri maitiro akasiyana ewe backlinks aunogona kuwana kubva kumawebsite eP PR - dofollow uye nofollow. Dofollow backlinks inopa kukosha kune nzvimbo yako pavanenge vachitumira juice. Tsvaga injini dzinocherechedza zviratidzo zvinouya kubva kumabhuku ane simba kuburikidza ne backlink uye kupa nzvimbo yako nzvimbo yakakwirira. Kushamwaridzana ne "nofollow" tag haikwanisi kuonekwa nekutsvaga bots uye kuunza zero kukosha panzvimbo yako yekutsvaga nzvimbo yekusimudzira. Mu HTML, dofollow ndiyo code yakakwana yezvibatanidza. Inoda kuwedzera chinhu chakakosha kumawebsite URL. Pane zvinopesana, nofollow backlinks inoda murairo chaiwo unoratidza kuti hukama haufaniri kuverengwa mumutambo.
Nzira yekuwana sei PR9 inotevera backlinks?
Nzira iri nyore yekuumba yakakwirira yeRR backlinks ndeyokutaura kana kuumba peji peji. Asi kutanga, iwe unofanirwa kuita tsvakurudzo uye tarisa kuwanda kwehuwandu hwehutano hwehutano hwehutano hwehutano uye funga kuti rudzi rwemotokari rwavanouya neiwe site yako.
Regai titarise imwe yenzvimbo dzakakurumbira dzepamusorosoro dzep social network dzinounza unhu hwehutano hwakanaka kune yako nzvimbo.
Unoda kugadzira bhizinesi rako peji pa Facebook, uye enda ku "Wedzera Static HTML peji" uye uende paIndaneti yako yeIndaneti yepamutemo pano. Zvino iwe unoda kuwana "Hindura" bhatani uye bvisa faira, index. html. Muchikamu chino unoda kuwedzera yako web source link mumutauro unotevera: Zita rako reBlog . Kuti apedze basa rekuumba a dofollow backlink pa Facebook, unofanira kuvhara pane "Save uye Publish" button.
Kuumba dofollow backlinks pa LinkedIn kwakafanana neyo Facebook. Iwe unoda kugadzira bhizinesi rako rega uye muchikamu che "Personal info" inosanganisira yako yekugara dofollow backlink. Zvimwe zvibatanidza zvaunogona kuvaka pazamu ino zvichange zvizere.